Noocyada tubta oo qudha | February 2020
Ugu Weyn Ee Noocyada tubta oo qudha
Noocyo isku dhafan oo nafaqo leh. Xayawaanka iyo Xeerarka Daryeelka
Dhammaan noocyada plomme waxaa loo kala qaybin karaa laba nooc: kuwaas oo awood u leh is-pollination, iyo kuwa la pollinated ka noocyo kale. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo dheeraad ah ee noocyada samobzplednyh, sababtoo ah waxay awoodaan inay keenaan wax-soosaarkooda oo badan. Oo ka mid ah noocyada samobzplodnyh yihiin miraha waaweyn oo badan. Laakiin weli, waa mid aad u fudud in la koro oo daryeelo xayawaanka iskood u samaysan, oo aan ka sheegi doono.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyada tubta oo qudha 2020